Tababaraha Xulka Qaranka Ciraaq Zico Maxaa u Qarsoon?
Saaxiibayaal qormadeena ciyaaraha waxaynu ku jeex-jeexeynaa halyeygii reer brazil berisamaadkii ZICO oo haatan Tababare u ah xulka qaranka ee Ciraaq dhawr kale oo wadana ka soo noqdey.
Haddaba carqaladda weyn ee hor taagan Tababare Zico sida uu ugu soo bixi lahaa koobka kubadda cagta Aduunka ee lagu qaban doono Caasimadda dalka Brazil Sanadka 2014,taas oo uu la guruub yahay wadamo aad u adag waxaana ka mid ah Japan oo horey tabare u ahaan jirey.
War saxaafadeed uu Zico ka jeediyey guriga AFC ee Caasimadda ciraaq Isniintii aynu soo dhaafney wuxuu ku nuux-nuuxsadey oo ka soo yeedhey Group-B- oo anu ku jirno aad ayuu u adgyahay laakiin kama baqayo waana ka kuuleysan doonaa xitaa xulka Japan.
Haddaba xulka Ciraaq iyo tababarahooda Zico oo la guruub ah Japa iyo Australia ayaa ah mid faraha la iskaga guban doono ee bal aynu aragno hanjabaada xiddigii reer Beazil haatana Tababare u ah xulka Qaranka Ciraaq.